Nehemaya 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 O wee ruo n’ọnwa Naịsan,+ n’afọ nke iri abụọ+ nke ọchịchị Atazaksis+ bụ́ eze, na mmanya dị n’ihu ya, mụ onwe m buuru mmanya bunye eze,+ dị ka m na-eme. Ma ọ dịtụbeghị mgbe m gbarụrụ ihu n’ihu ya.+ 2 Eze wee sị m: “Gịnị mere ihu gị ji gbarụọ agbarụọ+ ebe ọ bụ na ị naghị arịa ọrịa? Ọ dịghị ihe ọzọ ma ọ́ bụghị na obi adịghị gị mma.”+ Egwu wee jide m nke ukwuu. 3 M wee sị eze: “Eze, ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi!+ Gịnị mere ihu m agaghị agbarụ agbarụ mgbe obodo m,+ ụlọ ebe e liri nna nna m hà,+ bụ ebe e bibiri ebibi, ọkụ erepịawokwa ọnụ ụzọ ámá ya niile?”+ 4 Eze wee sị m: “Gịnị ka ị na-achọ ka e meere gị?”+ Ozugbo ahụ, m kpekuru Chineke nke eluigwe+ ekpere.+ 5 M wee sị eze: “Ọ bụrụ na ọ dị eze mma,+ ọ bụrụkwa na ohu gị dị gị mma,+ ka i ziga m Juda, n’obodo ebe e liri nna nna m hà, ka m wughachi+ ya.” 6 Eze wee sị m, mgbe nwunye ya nọ ọdụ n’akụkụ ya: “Njem gị ọ̀ ga-ewe ụbọchị ole, oleekwa mgbe ị ga-alọta?” O wee dị eze mma+ ịhapụ m ka m gaa, mgbe m gwara ya oge m ga-alọta.+ 7 M wee gaa n’ihu ịsị eze: “Ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ka e nye m akwụkwọ ozi+ m ga-enye ndị gọvanọ+ na-achị ofe Osimiri Yufretis,+ ka ha kwe ka m gafere ruo mgbe m garuru Juda; 8 ka e nyekwa m akwụkwọ ozi m ga-enye Esaf, onye na-elekọta ọhịa eze, ka o bunye m osisi m ga-eji wuo ọnụ ụzọ ámá nke Ebe E Wusiri Ike+ nke ụlọ ahụ,+ nakwa iji rụọ mgbidi+ obodo ahụ na ụlọ m ga na-abanye.” Eze wee bunye m ihe ndị ahụ, dị ka aka dị mma nke Chineke nke dị n’ahụ́ m si dị.+ 9 M wee mesịa bịakwute ndị gọvanọ+ na-achị ofe Osimiri Yufretis ma nye ha akwụkwọ ozi eze. Eze dunyekwara m ndị ọchịagha na ndị na-agba ịnyịnya. 10 Mgbe Sanbalat+ onye Bet-horọn+ na Tobaya+ onye na-ejere ya ozi, bụ́ onye Amọn,+ nụrụ ya, ọ ghọrọ ihe dị oké njọ n’anya ha+ na mmadụ bịara ịchọrọ ụmụ Izrel ihe ọma. 11 E mesịa, m bịarutere Jeruselem, nọrọkwa n’ebe ahụ ruo ụbọchị atọ. 12 M wee bilie n’abalị, mụ na ndị ikom ole na ole ndị so m, agwaghịkwa m onye+ ọ bụla ihe Chineke m na-etinye m n’obi imere Jeruselem,+ ọ dịghịkwa anụ ụlọ ọ bụla m ji ma e wezụga anụ ụlọ m nọ n’elu ya. 13 M wee si n’Ọnụ Ụzọ Ámá Ndagwurugwu+ pụọ n’abalị ruo n’ihu Isi Iyi Nnukwu Agwọ nakwa n’Ọnụ Ụzọ Ámá Ikpo Ntụ,+ m nọkwa na-enyocha mgbidi+ Jeruselem, otú e si kwatuo ya, ọkụ repịakwara ọnụ ụzọ ámá+ ya niile. 14 M wee garuo n’Ọnụ Ụzọ Ámá Iyi,+ ruokwa n’Ọdọ Mmiri Eze, ma ọ dịghị ebe anụ ụlọ nke bu m ga-esi gafee. 15 Ma m nọ na-agbago na ndagwurugwu iyi+ n’abalị, m nọkwa na-enyocha mgbidi ahụ; e mesịa, m laghachiri azụ wee si n’Ọnụ Ụzọ Ámá Ndagwurugwu+ banye, wee lọta. 16 Ndị osote onye na-achị achị+ amaghị ebe m gara na ihe m nọ na-eme; agwabeghịkwa m ndị Juu na ndị nchụàjà na ndị a ma ama na ndị osote onye na-achị achị na ndị ọrụ ndị ọzọ ihe ọ bụla. 17 N’ikpeazụ, m gwara ha, sị: “Unu na-ahụ ọnọdụ ọjọọ anyị nọ na ya, otú e si bibie Jeruselem, gbaakwa ọnụ ụzọ ámá ya niile ọkụ. Bịanụ ka anyị wughachi mgbidi Jeruselem, ka a ghara ịnọ na-akọcha anyị.”+ 18 M wee gaa n’ihu ịgwa ha banyere aka+ Chineke m, otú o si dị mma n’ahụ́ m,+ nakwa ihe+ eze gwara m. Ha wee sị: “Ka anyị bilie, anyị ga-ewukwa ya.” Ha wee mee ka aka ha dị ike maka ọrụ ọma ahụ.+ 19 Mgbe Sanbalat+ onye Bet-horọn na Tobaya+ onye na-ejere ya ozi,+ bụ́ onye Amọn,+ na Gishem+ onye Arebia+ nụrụ ya, ha malitere ịkwa anyị emo+ ma na-eleda anyị anya, sị: “Gịnị bụ ihe a unu na-eme? Ọ̀ bụ eze ka unu na-enupụrụ isi?”+ 20 Otú ọ dị, m zara ha wee sị ha: “Ọ bụ Chineke nke eluigwe+ ga-eme ka ihe gaara anyị nke ọma,+ anyị onwe anyị kwa, bụ́ ndị ohu ya, ga-ebili, anyị ga-ewukwa ya; ma unu onwe unu enweghị òkè+ ma ọ bụ ihe ruuru unu ma ọ bụ ihe ncheta+ n’ime Jeruselem.”